जीवनमा ठूला घटना घट्नु अघि देखिन्छन् यस्ता संकेत, तपाईले नि देख्नुभएको छ कि ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/जीवनमा ठूला घटना घट्नु अघि देखिन्छन् यस्ता संकेत, तपाईले नि देख्नुभएको छ कि ?
२ ऐना : घरमा ऐनाको ठूलो महत्व छ । ऐना हातबाट खसेर फुट्यो भने अशुभ मानिन्छ । फुटेको ऐनामा अनुहार हेर्नु अझै नराम्रो मानिन्छ । खासमा ऐना फुट्नु अशुभ घटनाको संकेत हो ।** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
६ चाँवी : चाँवीलाई सम्पूर्णताको प्रतिक मानिन्छ । यदी तपाइँको चावी सफा गर्दा पनि पटक पटक फोहोर नै भएको पाउनु हुन्छ भने यो शुभ मानिन्छ । चावीलाई बच्चाको शिरानीको तल राख्दा शुभ हुने मानिन्छ ।** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **